Soomaaliya oo Helis Ugu Jirta in ay Weyso Codka ay Ku Leedahay QM - Radio Simba 95.0 MHZ - Simbanews - Idaacada Simba
Soomaaliya oo Helis Ugu Jirta in ay Weyso Codka ay Ku Leedahay QM
Warbixin ay soo saartay Qaramadda midoobay ayaa lagu soo bandhigay Liiska Wadamada aan wali bixinin Lacagaha qaaraanka ah ee miisaaniyadda golaha guud Qaramada Midoobay, waxaana qeyb ka ah dalka Soomaaliya.
Dalalka lasoo bandhigay waxaa kamid ah Soomaaliya,Qaramadda midoobay ayaa sheegtay in Soomaaliya lagu leeyahay lacagta deynta ah oo dhan 1.4 milyan, sida lagu soo bandhigay shaxda wadamada aan bixin oo ay Soomaaliya ku jirto.
Soomaaliya ayaa helis ugu jirta in ay weyso codka ay ku leedahay Qaramada Midoobay, maadaama aysan bixin lacagta deynta ah.
Xeerarka Qaramadda midoobay ayaa dhigaya in dal kasta oo aan bixin lacagta uu weynayo xuquuqda codeynta ee golaha guud, haddii aysan jirin duruuf ka baxsan gacanta dalka.
“Xubin ka tirsan Qaramada Midoobay oo lagu leeyahay dayn bixinta tabarucaadkeeda maaliyadeed ee Ururka wax cod ah kuma yeelan karo Golaha Guud haddii inta ay le’eg tahay ama ka badan tahay qaddarka qaaraanka ee ka soo baxay labada hore oo buuxa,si kastaba ha ahaatee, wuxuu u ogolaan karaa xubintaasi inuu codeeyo haddii uu ku qanco in bixin la’aanta ay sabab u tahay shuruudo ka baxsan xakamaynta xubinta,”.ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Qaramadda Midoobay.
Dalalka Kale ee lagu leeyahay lacagta waxaa kamid ah Comoros, Sao Tome & Principe.
Lama ogo sida Soomaaliya ay kaga jawaabi doonto go’aanka kasoo baxay Qaramadda midoobay.